Dusha EarBuds, beddelka cusub ee Microsoft ee AirPods | Wararka IPhone
Munaasabaddii lagu soo bandhigayay Microsoft ee 'Surface range' cusub, shirkadda weyn ee kumbuyuutarradu waxay ka yaabisay dadka deegaanka iyo shisheeyahaba Duo dusha, taleefan casri ah oo wata laba shaashad oo isku laaban 360 darajo. Laga soo bilaabo terminalkan nama gabi ahaanba waxba laguma xaman. Laakiin ma ahayn layaabka kaliya.
Surface Neo, oo ah kiniin, sidoo kale leh laba shaashad, ayaa ahaa sheeko kale. Laakiin marka lagu daro, shirkadda Satya Nadella waxay si rasmi ah u soo bandhigtay ballanqaadka Microsoft ee sameecadaha dhagaha la gashado. Waxaan ka hadleynaa dusha 'EarBuds' oogada, sameecadaha dhagaha ee si gaar ah ugu baaqa naqshadooda, naqshad lagu caddeeyo faa'iidooyinkeeda.
Sida moodooyinka ugu casrisan ee nooca sameecadaha dhagaha ee runta ah AirPods, oo la soo bandhigay bilihii la soo dhaafay (Sony, Amazon iyo Samsung), EarBuds-ka waxay na siisaa nidaam tirtir firfircoon, shaqo sida ay Koodh ka yimid beta-kii ugu horreeyay ee iOS 13.2 wuxuu run ku noqon karaa jiilka soo socda ee AirPods taas oo arki lahayd iftiinka dhammaadka bishan. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale na siineysaa nidaam tarjumaad isku mar ah oo lagu qoro in ka badan 60 luqadood.
Sida aan ka arki karno fiidiyowga soo-bandhigga, Surface EarBuds waxay na siisaa dusha sare ee dusha sare, dusha noo saamaxaya inaan la falgalno qalabka oo aan muusig garaacno. Laakiin marka lagu daro, waxay sidoo kale noo oggolaaneysaa inaan maamulno dib u soo celinta bogagga 'PowerPoint', oo ah shaqeyn laga tagi karay inuu qaato naqshad soo jiidasho leh.
Madax-bannaanida EarBuds, oo ay weheliso sanduuqa xukunkiisa, gaadho 24 saacadood. Qiimaha sharadka cusub ee Microsoft ee sameecadaha dhagaha la ’wuxuu gaarayaa $ 249 wuxuuna gaari doonaa dhamaadka sanadka, bilowgiisana Mareykanka. Waqtigan xaadirka ah ma naqaano qorshooyinka balaarinta Microsoft ee sameecadahaas, iyo sidoo kale kuwa Amazon ee Echo Buds, oo qiimahoodu yahay $ 129 oo waliba na siinaya nidaam baajinta buuqa oo ay soo diyaarisay Bose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Dusha EarBuds, beddelka cusub ee Microsoft ee AirPods